Ubomi Obunokubakho | Isilimela 2022
Imibuzo esi-7 enamandla yokufumana ukuba ufuna ukwenza ntoni ngobomi bakho
Ufuna ukwenza ntoni ebomini? Ukuba uziva ulahlekile kwaye uzive ubambekile apho ukhoyo, le mibuzo iyi-7 inamandla ngokwaneleyo okukunceda ukuba ubone ukuba ufuna ukwenza ntoni ngobomi bakho kwaye ungazinzi.
Andazi ukuba mandenze ntoni ngobomi bam! Amanyathelo ama-5 okufumana unstuck
Andazi ukuba ndenzeni ngobomi bam! ' Ukuba uyazibuza ukuba wenzeni kwaye loluphi ulwalathiso ekufuneka ulwenzile, funda apha ukuze ufumane ukucaca kunye nokuhambisa ukudideka okudlulileyo.
Izinto ezili-10 onokuzenza ngoku ukutshintsha uBomi bakho ngonaphakade
Ngaba ungafunda ngenene ukuba ungabutshintsha njani ubomi bakho bube ngcono? Nazi izinto ezili-10 onokuzenza ukufezekisa amaphupha akho nokuba ujongene nemiceli mingeni.
Ungabuphila njani uBomi ngokugqibeleleyo kwaye ubonwabele usuku ngalunye
Uhlala kube kanye, kwaye ubomi bufutshane ngendlela ebuhlungu. Funda indlela yokuphila ubomi ngokuzeleyo ngala manyathelo alula aya kukusa kufutshane nobomi obuthandayo.
Ungaqala njani ngaphezulu kwaye uqalise kwakhona uBomi baKho xa kubonakala ngathi mva kakhulu
Ngaba ufuna ukwenza utshintsho kodwa ucinga ukuba lihambile ixesha ukuqala ngokutsha? Nantsi indlela yokuqalisa ebomini kwaye uphile ubomi obufuna ngokwenene.
Iindlela ezili-10 zokuchonga iitalente zakho kwaye uzisebenzise
Ukucinga ukuba ungayifumana njani italente yakho kwaye uyiqinisekise? nantsi indlela yokuchaza iitalente zakho zokwenyani kwaye uzisebenzise ukuze uphumelele ebomini.
Uyenza njani iSicwangciso soBomi esisebenzayo (ngeTemplate yeSicwangciso soBomi)
Ukucinga ukuba ungasenza njani isicwangciso sobomi? Ngaba unqwenela ukufumana ubomi bakho ukuze uphumelele? Sebenzisa itemplate yethu yesicwangciso sobomi simahla ukuyenzela ngokwakho!
Imigaqo eli-16 elula yokuPhila ngoBomi obuPhumeleleyo noBuzalisekisayo
Ngaba uyangxama ukufumana umzuzu woxolo ngemini apho unokubeka iinyawo phezulu kwaye uphumle? Nayi imigaqo elula eyi-16 onokuphila ngayo ukuze uphumelele ebomini - imigaqo ebalulekileyo yobomi.
Kutheni Ndifumene Ithamsanqa Elibi? Izinto ezi-2 ezilula zokuTshintsha ikamva lakho
Ngaba uzifumanisa usilela kwaye usenza iimpazamo? Ngaba uyazibuza ukuba 'Kutheni ndinethamsanqa nje?' Ukuba nguwe lo, yile ndlela ungayitshintsha ikamva lakho.
13 Iingxaki zoBomi obuqhelekileyo kunye nendlela yokuzilungisa
Sijongana neengxaki njengoko siphefumla kodwa ngaba kufanele zisithintele ekufikeleleni kumandla ethu amakhulu? Nantsi indlela yokusombulula ezinye zeengxaki zobomi eziqhelekileyo.
Ungabuyeka njani uBomi bakho obukruqulayo kwaye uqalise ukuhlala onomdla
Ngaba ucinga ukuba unobomi obudinayo? Ukuba awuqinisekanga ngendlela yokwenza ubomi bunomdla ngakumbi, nazi iindlela ezili-17 zokuba uqale namhlanje.
Imiceli mngeni emi-6 kuBomi kufuneka woyise ukuze ubengumntu ongcono
Ukuba ufuna ukukhula ube ngumntu owomeleleyo kwaye onwabile, kuya kufuneka ukhule kule mingeni mithandathu ebomini. Awunakho ukunqanda kwaye kufuneka uboyise ukuze ube ngumntu ongcono.
Iindlela ezi-7 zokwenza iZigqibo eziTshintsha uBomi
Izigqibo zobomi zinokuba nzima ukuzenza kodwa unamandla okwenza ezifanelekileyo. Nazi iindlela ezisixhenxe zokwenza izigqibo zokutshintsha ubomi.
UngabuPhila njani uBomi obuLungileyo ngokwenza ezi ziKhetho zisi-8
Ukufunda indlela yokuphila ubomi obulungileyo ayisiyonto ilula, kodwa ukwenza ezi zikhetho zili-8 kunokukunceda uhambe kwicala elilungileyo kwaye uqale ngokuhlala wonwabile kwaye usempilweni namhlanje.
Iindlela ezi-7 zokufumana eyona nto uyifunayo ebomini
'Into endiyifunayo ebomini ngu ... ummm ...' Ndibambe impendulo? Ukuba awuyazi eyona nto uyifunayo ebomini, awuwedwa. Funda iingcebiso ezisixhenxe zokukunceda ufumane.
Yintoni ukuThandeka kunye nokuba kuthetha ntoni ukuba noMnqweno
Yintoni uthando? Unokuba nalo lonke uthando lomhlaba lwento ethile kodwa ukuba awusoze wenze nto malunga naloo nto, ukuthanda oko akunamsebenzi. Thatha isigqibo sokutshintsha namhlanje.
Ungazihlaziya njani kwaye utshintshe ubomi bakho bube ngcono
Ngaba uyafuna ukuphila ubomi bamaphupha akho kodwa ungaqinisekanga ukuba ungaqala ngaphi? Nantsi indlela yokuzihlaziya kwakhona kwaye uqalise ukwenza utshintsho ebomini.
Iindlela ezili-9 zokuba ngumntu ongcono kwaye wonwabe
Ukucinga ukuba ungangumntu onjani kwaye uphile ubomi obuzele ngakumbi? Zama ezi 9 zotshintsho oluncinci oluya kukunceda ube ngumntu ongcono.
Eyona Nto ithetha ukuBamba uSuku
Xa uwuthatha usuku, uyabuxabisa ubuhle balo mzuzu wangoku kwaye ube nesibindi sokuthatha inyathelo kwaye utsibe kwikamva lakho.
Indlela yokwakha ukuzithemba kwakho: Isikhokelo sokuFumanisa amandla akho afihliweyo
Imvakalelo eqinisekileyo yokuzithemba inokuba nefuthe kwaye iguqule ngamandla onke amacandelo obomi bakho. Nantsi inyathelo lakho ngenyathelo malunga nendlela yokwakha ukuzithemba.